मेगा बैंकसहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ? - नेपालबहस
मेगा बैंकसहित यी पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग ?
| १३:२९:२२ मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । लामो समयदेखि करेक्सनको यात्रामा अधि बढिरहको नेप्सेमा बुधबार पाँच कम्पनीको शेयरमा उच्च माग देखिएको छ ।
आज बुधबार नेप्सेमा कारोबारमा आएका कम्पनीहरुमध्येमा चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी, मेगा बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनी, ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथको शेयरको उच्च देखिएको हो ।
कारोबार सुरु भएदेखि फागुन २६ गते सम्म आईपुग्दा कम्पनीको प्रतिशेयरमूल्य ८ सय नाघेको छ । प्रतिशेयरमूल्य ८ सय नाघेपनि शेयर बेच्ने शून्य छन् । भने शेयर खरिद गर्नेको चने चाप देखिन्छ ।
त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनी शेयरमा पनि उच्च माग देख्न सकिन्छ । कम्पनीलाई मंगलबार धितोपत्र बोर्डले हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको थियो ।
जसकारण बिहीबार कम्पनीको शेयर किन्नेको भिड् लागेको हो । त्यस्तै बुधबार मेगा बैंक लगायत ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथको शेयरको खरिदमा उच्च चाप लागेको छ ।
पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? १३ घण्टा पहिले
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या १३ घण्टा पहिले
रातारात अधिवेशन अन्त्य १३ घण्टा पहिले
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि दिल्लीका विद्यालयहरू बन्द ६ दिन पहिले
बन्दीपुरमा निर्माणाधीन केबुलकार दशैँसम्म सञ्चालनमा आउने ३ हप्ता पहिले
मौसममा सुधार आउन अझै केही दिन लाग्ने ३ हप्ता पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् १२ महिना पहिले
शनिबार पशुपतिनाथलाई चिसोबाट जोगाउन धनुर्मास पूजा गरिने ३ महिना पहिले
रिडी –रुद्रबेनी सडक एक सातादेखि अवरुद्ध ६ महिना पहिले
मातातीर्थ औँशी, आमाको नाममा श्राद्ध र तर्पण दिनेहरुको भीड ! २ वर्ष पहिले